အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Jun 24, 2010
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, June 24, 2010 Thursday, June 24, 2010 Labels: နှုတ်ခွန်းလွှာ
ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှန်းမသိရဘဲ ကျွန်မတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေး Mylovecafe ဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ လုံးဝကို ဖွင့်မရအောင် ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်.. ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကို အမှီပြုပြီး ဘလော့ရေးနေကြတဲ့ ၀ါသနာရှင်များ အားလုံးလည်း ဒုက္ခရောက်ကြပါတော့တယ်.. တစ်နေ့ပြန်ကောင်းနိုး ပြန်ကောင်းနိုးနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာ စောင့်စားနေကြသော်လည်း တစ်လနီးပါးရှိလာသည်အထိ ပြန်ကောင်းမလာခဲ့ပါဘူး.. ကိုယ့်လိုဘဲ ဘလော့လေးဖွင့်မရကြတော့တဲ့ စာရေးဖော်အားလုံးကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ အားနာမိရပါတယ်.. ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း စာပြန်ရေးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံစဉ်းစားပြီး၊ မိတ်ဆွေတွေဆီက အကူအညီပေါင်းစုံနဲ့ အမျိုးမျိုး ကြိုးစားပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒီဘလော့လေးကို ယခင်အဟောင်းအတိုင်း ဒီဇိုင်းလေးကအစ တစ်ထပ်တည်းပြန်ဖြစ်အောင် အကောင်းအထည် ဖော်မိပြန်ပါပြီ.. တကယ်တော့ ဒီဘလော့ဟာ ယခင်က အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်မဟုတ်ပါဘူး.. မနေ့တနေ့ကမှ အသစ်ပြန်လုပ်ထားတဲ့ အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်သာ ဖြစ်ပါတယ်..
ကျွန်မအတွက် ဘလော့အခုလိုပြောင်းရတာ ဒီတစ်ကြိမ်ဟာ ဒုတိယအကြိမ် ပြောင်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.. ယခင်ကလဲ ရေးလက်စ Wordpress က ၀င်မရဖြစ်ပြီး စာတွေဆက်ရေးလို့ မရတော့တာကြောင့် Mylovecafe မှာ ပြန်ပြောင်းရေးရပါတယ်.. အဲဒီချိန်တုန်းကလဲ ပိုစ့်တွေကို တစ်ပုဒ်ချင်း ရွေ့ခဲ့ရပါတယ်.. ဘလော့ စရေးခါစလဲဖြစ်တော့ ပိုစ့်တွေကို Import လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတာကို နားမလည်ခဲ့မိလို့ပါ. ခုတစ်ခါတော့ ကံကောင်းတာက အရင်ဘလော့လေး မပျက်သွားခင်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်နဲ့ Back Up လုပ်ထားလိုက်မိပါတယ်.. Back up လေး လုပ်ထားလိုက်မိတော့ အရင်ကရေးခဲ့တဲ့ပိုစ့်တွေ အားလုံးနီးပါး ပြန်ရပါတယ်.. ဒီအတွက် အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာ မိရပါတယ်. ဒါကြောင့် Back up လုပ်ထားဖို့ တိုက်တွန်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောကြားခွင့်ပြုပါရှင်.. Mylovecafe မှာ ရေးနေသူ အားလုံးနီးပါး ဘယ်သူမှ Back up လုပ်ထားကြမှာ မဟုတ်လို့ သူတို့တွေရဲ့ ရေးပြီးသားစာတွေအားလုံး ပျောက်ဆုံးကုန်တဲ့အတွက်တော့ အားလုံးနဲ့ထပ်တူ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်.. ဒါကြောင့် စာရေးဖော်များကို တိုက်တွန်းချင်တာက ကိုယ့်ဘလော့လေးကို မကြာခန Back Up လုပ်ပေးကြပါဆိုတာပါဘဲ.. မဟုတ်ရင် ကိုယ်ကြိုးစားရေးခဲ့သမျှ မမျှော်လင့်တဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်..
ကျွန်မတို့မှာ စာရေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့၊ ၀ါသနာက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးတွေနဲ့ ရေးနိုင်မလဲဆိုတာကို ဘလော့ဖွင့်မရတဲ့ ရက်တွေမှာ နေ့စဉ် စဉ်းစားကြံဆရင်း နည်းလမ်းတွေရှာမိပါတယ်.. စာအမြဲ လာဖတ်သူများကိုလည်း အားနာမိပါတယ်.. အများတကာ ရေးနေတဲ့ Blogspot မှာလဲ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ရေးလို့ အဆင်မပြေတာကြောင့် ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မရဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ချစ်ခင်ရပါသော မမြသွေးနီ နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးကာမှ Hosting တစ်ခု ၀ယ်လိုက်ပြီး ယခင်ကအတိုင်း အရှိန်မပျက် စာတွေ ပြန်ရေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပြန်ပါပြီ.. လဲပြိုသွားပေမဲ့ ပြန်ထဖို့ ကြိုးစားကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မတို့ ရေးတဲ့ စာတွေကို အမြဲလာဖတ်ကြသူများ စာရေးဖော် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ၊ ဘလော့လေးအတွက် အားတက်သရော အကူအညီပေးကြသူများ၊ အကြံပေးမေးမြန်းကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.. ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေက အိမ်ကို မမျှော်လင့်ဘဲ ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ မိုးရာသီ လမ်းခရီး အတွေ့အကြုံများကို မကြာခင်မှာ ဓာတ်ပုံများနဲ့ ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်..
ယခင်ကလိုဘဲ စာတွေကို အဆင်ပြေပြေ ဖတ်ရှုနိုင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထားပါတယ်. စာတွေကိုလဲ ယခင်ကလို အတတ်နိုင်ဆုံး ပြန်ရေးပါမယ်လို့ အားလုံးကို အသိပေးရင်း အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်အသစ်ကို အားမာန်အပြည့်ဖြင့် ပြန်လည် မွေးဖွားလိုက်ပါကြောင်းရှင်..